HighMO Bursa ဌာနခွဲအမြန်နှုန်းရထားမျှော်လင့်ခြင်း။ RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaIMO Bursa ဌာနခွဲ၏မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏မျှော်လင့်ချက်
22 / 10 / 2019 16 Bursa, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
အမြန်ရထားမျှော်လင့်ချက် imo bursa subenin
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Cahit Turan ၏ပြောကြားချက်အရယခုနှစ် Bursa သည် 2023'te ၌သာအဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် Bursa-Osmaneli တို့၏တည်ဆောက်ပုံ၊ အချက်ပြခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးခြင်း၊
မရေရာသည့်စကားများအရ '' တင်ဒါသည်ဘတ်ဂျက်အထောက်အပံ့နှင့်အညီယခုနှစ်အကုန်တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည် '' ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီကြေငြာချက်ကိုဖတ်နေစဉ် Bursa မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကုန်သည်ကြီးများအသင်း Mehmet Albayrak က
သူကကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်သို့ပြောကြားရာတွင် IMO ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကော်မရှင်သည် Bursa မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်း၏ကံကြမ္မာအကြောင်းအစီရင်ခံစာပေးပို့ခဲ့သည်။
ဒီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Ahmet Emin Yılmaz ထောင့်၌မကြာသေးမီကကြေညာခဲ့သည်။
“ ငါတို့မြို့အတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားရဲ့အရေးပါပုံကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သို့သော်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကိုဖြတ်သန်းသွားရန်စီစဉ်ထားသော Bursa-Bilecik (Osmaneli) အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်းအားကုန်ကျစရိတ်အတွက် High Standard Railway သို့ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။ Bursa အားကစားကွင်း၊ နေရာဒေသတိုင်း၌မြေအောက်ရထားသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဗဟိုကိုဖြတ်တောက်သည်။ ထပ်တိုးတန်ဖိုးများရှိသော်လည်း၎င်းသည် Ankara ၏ထောက်ပံ့မှုကိုလုံလောက်စွာမရရှိနိုင်သောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ”
ဤ IMO သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကော်မရှင်၏ဤလိုင်းများအမှန်တကယ်မြို့တော်မှမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖြစ်ကြသည်။
ရှင်းနေသည်မှာသူတို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများကိုမြို့တော်သို့ခေါ်ဆောင်လာသည်။ unuz မင်းဒီမြို့ကိုမစွန့်လွှတ်ပါနှင့်ဟုပြောလိုက်သည်။
Bursa စီမံကိန်း၏အုတ်မြစ်သည် 2012 ၏အဆုံးတွင်တည်ရှိကြောင်းသတိရစေသည်။
အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုလွဲချော်သွားသည်။ Osmaneli Osmangazi တံတားအစားအစ္စတန်ဘူလ်သို့သွားခြင်းသည်အောက်ပါတို့ကိုအာရုံစိုက်စေသည်။
Keş“ အင်ဂျင်နီယာ mez” ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ချင်ပါသည်။ သို့သော် IMO Bursa ဌာနခွဲက 'Osmangazi တံတားမှတစ်ဆင့်အမြန်ရထားဖြင့်အမြန်ရထားဖြင့်ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် Istanbul သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါစေ' ဟုစောဒကတက်ခဲ့သည်။
၎င်းကိုမအောင်မြင်နိုင်သော်လည်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောစနစ်ကိုအဆင့်မြင့်ရထားလမ်းအဖြစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့ရသည် ဒီအကြောင်းပြချက်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၏အခက်အခဲနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ကြသည်။ Bursa ၏နှောင့်နှေးနေသောမီးရထားလမ်းကိုမြန်နှုန်းမြင့်ရထားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စီမံကိန်း၏အစဖြစ်သောBandırmaနှင့်ဆက်သွယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုတောင်းသောလိုင်းဖြစ်သော Gemlik Port (ပင်လယ်ဆက်သွယ်မှု) နှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် Eskisehir သည် Bursa အပြင်ဘက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်နယ်ရှိရထားလမ်းဖြင့်အတိုဆုံးအကွာအဝေးမှပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ TCDD သည်ဤအဆိုပြုချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမြန်နှုန်းမြင့်ရထားအဖြစ် Bursa လိုင်းကိုကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသည်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်ငွေပေးချေရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။
IMO အနေဖြင့် Bursa ရှိ NGO များနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအားအောက်ပါအချက်များဖြင့်အရေးယူစေလိုသည်။
“ IMO Bursa ဌာနခွဲအနေနဲ့ကျနော်တို့အနေနဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကျန်ရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းမရှိဘူး၊ စီမံကိန်းလည်းမရှိဘူး၊ အလုပ်မရှိတော့ဘူး” ဆိုတဲ့ကတိကနေစပြီးသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan က Bursa မှာကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းပြီးစီးမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်မြို့တော်၏နောက်ဆုံးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အရေးယူဆောင်ရွက်စေလိုပါသည်။
IMO Bursa ဌာနခွဲသည်ဒီကိစ္စကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာပြသခဲ့သည်။အဖြစ်အပျက်- Ihsan Aydin)
Bursa, တူရကီတစ်ခုလုံးကိုမြန်နှုန်းရထားလိုင်း ချိတ်ဆက်. ပါလိမ့်မယ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်း ...
Bursa မြန်နှုန်းမြင့် Mobilization Ankara! 'Bursa ထိုက်တန်'
တူရကီရဲ့ Bursa နှင့် Native တိုက်စတားအတွက်ထုတ်လုပ်မှု
Bursa UKOME'n ရှိမီနီဘတ်စ်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားရုံးကရပ်တန့်လိုက်သည်
Hisarcıklıoğlu Thrace နှင့် Edirne အတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၊ …
ယနေ့သမိုင်းတွင် -5ဒီဇင်ဘာ 2003 အန်ကာကာ - အစ္စတန်ဘူလ်အစာရှောင်ခြင်း…
မြန်နှုန်းမြင့်ရထား Edirne ၏လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးဘဝ ...
pre-ဖွင့်ပွဲ Haramain အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်းကျင်းပခဲ့သည်
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကုန်သည်ကြီးများအသင်း Bursa ဘဏ်ခွဲ
Yenişehir Osmaneli မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်း